လောကျသရှေကျ ဆေးနညျးလေး - Latest Myanmar News
July 23, 2021 July 23, 2021 by Latest Myanmar News
ခုခြိနျမှာCOVID_-19ရောဂါတှဖွေဈပှားနတေဲ့အတှကျ ဆေးအဖွဈ ညှနျ့ပေးလိုကျပါတယျ
လောကျသရှေကျဟာလူ့ခန်ဓာကိုယျမှာရှိတဲ့ အသကျရှူလမျးကွောငျးကပိုးတှေ အဆုပျတှတှေကျသနျ့စငျဆေးကွောပေးတဲ့အထိရောကျဆုံး ဆေးဖွဈပါတယျ
အနံ့မရသူတှေ ကိုဗဈဖဈနတေဲ့သူတှအေတှကျအရမျးကောငျးတဲ့ဆေးပါ လောကျသရှေကျ(၁၀)သားကို ဆေးကွောသနျ့စငျပီး ရတေဈဖလားခနျ့ထညျ့ပီး ပွုတျကြိုပါ။
ဆားအနညျးငယျထညျ့ပါ။ သံပရာတခွမျးလှီးထညျ့ပါ။တဈရကျ သုံးခှကျသောကျပေးခွငျး ဖွငျ့ ကိုဗဈပြောကျကငျး စပေါတယျCOVID-19အတှကျအရမျးထိရောကျမှုရှိတဲ့ ဆေးပါ။
မှတျခကျြ။ ဆီးခြို သှေးတိုး ကြောကျကပျသမားတှတှေကျ တဈရကျ တဈခှကျပဲ သောကျသုံးပေးပါဒီဆေးနဲ့ ကခငျြပွညျနယျ၊ ပူတာအို ဒသေမှာ Covid-19 ပိုး တှလေူ့နာ တှေ အမြားကွီး ပြောကျကုနျပါပွီ။
နာမညျကတော့ လောကျသရှေကျ၊ ရှေးလူကွီးတှကေ ဝမျးလြောတဲ့ အခါ၊ခြောငျးဆိုးတဲ့အခါတောကျတောကျစဉျး၊အခွောကျလှနျးပွီး ကြိုခကျြသောကျခဲ့ကွပါတယျ။
ယခု Covid-19 ဖွဈတဲ့လက်ခဏာ ပွလာတဲ့အခါ Covid-19 မှနျး မသိဘဲ ဖွဈနကွေ ရိုးရိုးသာမနျ၊ ရာသီတုပျကှေးလို့ ယူစပွီး သောကျခဲ့ကွရာကနေ တကယျတမျး Covid ဖွဈတဲ့သူက
သကျသာလာခဲ့ကွတာပါ။အဲဒီကနေ တဆငျ့ပွီးတဆငျ့ လူသိမြားလာပွီး လူတိုငျးလိုလိုပဲ သောကျသုံး နကွေပါတယျ။
ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ လူတိုငျးလူတိုငျး စမျးသပျသောကျသုံးသငျ့ပါတယျ။(အရှုံးမရှိဘူး) ကိုယျတိုငျသိပွီး အခွားသူမြားလညျး သိအောငျ တငျပေးလိုကျပါတယျ။
လောကျသရှေကျ သုံးခှကျ တဈခှကျတငျ၊ ကွို၍သောကျကိုဗဈ ပြောကျကငျးသူတှေ မြားလာနပွေီ ။
ကိုဗဈ ဖွဈပွီး လောကျသရှေကျသောကျ၍ ပြောကျသူတှကေိုယျတှေ့ ပွောကွပါတယျ ။အနာနဲ့ဆေးတှေ့၍ အမွနျဆုံးသကျသာပြောကျကငျးကွပါစေ။
ယိုးဒယားကပွနျလာတဲ့ ဆရာသမားပွောလို့ ကြှနျတေျာ့သူငယျခငျြး လညျခြောငျး ကငျဆာဖွဈတာ ဒီလောကျသရှေကျ နဲ့မှ အရှငျးပြောကျရောဗြာ တကယျလကျတှပေ့ါ။။
နောကျပွီး HIV ပိုး။ သူ့ကတြဈမြိုး လောကျသရှေကျကို အခွောကျခံ ရနှေေးနဲ့သာ လကျဖကျရညျကွမျး သောကျသလိုသောကျဗြာ တဈလပဲ ကွာမယျ။ စဈကွညျ့ဗြာ။ ပိုးကောငျရကေပြွီး ၂ လဆို အရှငျးပြောကျကငျးသှားနိုငျပါတယျ။
ဦးဇငျးတို့ ကြေးရှာဘကျမှာ ပေါပါတယျ၊ အထူးသဖွငျ့ ရှမျးပွညျနယျဘကျ။အဆုပျအတှကျ ကောငျးတဲ့ဆေးမို့…
ပအိုဝျးအ ချေါ… သီကြာဗငျ=(သိကွားမငျးလှံ)
ထိုသို့ သိကွသျောလညျး ဆေးလိပျစှဲနပွေီးဆေးလိပျမဖွတျနိုငျကွသူမြားအတှကျဆေးလိပျစှဲမွဲစှာ သောကျသုံးခဲ့ပွီး ဆေးလိပျဖွတျသူ မြားလညျး အဆုတျ သနျ့ရှငျးအောငျ ပွုလုပျရနျ သငျ့လြှျောသောနညျး ဖွဈပါသညျ။နညျးစနဈမှာ အောကျပါနညျးဖွငျ့ ပွုလုပျရပါမညျ။
လူတိုငျးနီးပါး သိရှိသော လောကျသပေငျမှ လောကျသရှေကျ (၅) ကပျြသား ခူးယူပွီး ရမေတျခှကျ သုံးခှကျနှငျ့ ပွုတျကြိုပါ။ ရမေတျခှကျတဈခှကျစာကနျြလြှငျအအေးခံစဈယူပွီး ထိုပွုတျရညျအား တဈနတေ့ညျးကုနျအောငျ သောကျပေးပါ။
ထိုသို့(၅) ရကျဆကျ တိုကျသောကျ ပေးလြှငျ ဆေးခြိုး၊ ဆေးခြေး(ကွေး) မြား ကှာကပြွီး အဆုတျသနျ့ရှငျး သှားစပေါလိမျ့မညျ။
ဆယျရကျခနျ့အထိ ဆကျတိုကျ ပွုလုပျ သောကျနိုငျ ပါသညျ။ဆေးခြိုး(ကွေး) မြားကှာကြ သှားလြှငျ အသကျရှူ ၍ ပိုမိုကောငျးမှနျ လာပွီးသိသာစှာ လနျးဆနျး ပေါ့ပါးလာပါလိမျ့မညျ။
အထကျပါနညျးစနဈက အဆုတျတှငျအနာပေါကျသူ၊ တီဘီရောဂါကိုပငျ တဈလမှ သုံးလအထိ ဆကျတိုကျမှနျမှနျ သောကျပေးခွငျးဖွငျ့ အဆုတျနာ ရောဂါ သကျသာပြောကျ ကငျးသူ ရှိခဲ့ပါသညျ။
ထို့အပွငျ မညျသညျ့ဘေးထှကျဆိုးကြိုးမြှမရှိဘဲအဆုတျကို စငျကွယျ ကောငျးမှနျစပေါသညျ။ ။လောကျသရှေကျကို အဆုတျကောငျးစရေနျ အမှတျတရသုံးစှဲသငျ့ပသေညျ့အပွငျ…
ပနျးသဖွေဈက ၀မျးမသာရသညျက အမြိုးသားတို့၏ ဘဝသာဖွဈသညျ။ အမြိုးသားတို့ဖွဈတတျကွသော ပနျးသရေောဂါတှငျလညျး လောကျသပေငျ၏ အစှမျး အံ့မခနျးပါဝငျပွနျသညျ။
လကျတှေ့ ပနျးသရေောဂါ ခံစားခဲ့ဖူးသူ မိတျဆှတေဈဦးက လောကျသပေငျသညျ ဆေးအဖွဈအသုံးပွုသော ဟငျးလြာ ဖွဈပါကွောငျး ယုံကွညျသူတို့ အတှကျ အမှနျပငျ ပနျးသရေောဂါ ကို ပြောကျကငျးစသေညျ ဟုဆိုပါသညျ။
စားဖှယျအဖွဈ လောကျသရှေကျ လယျပတူရှကျ ငရံ့ပတူရှကျနှငျ့ ဆီးဖွူသီးတို့ကို ရနှေေးဖွငျ့ ဖြော၍ အစားသှပျပွီး ပုံမှနျသုပျစားခွငျးပငျ ဖွဈသညျဟုဆိုပါသညျ။
ထိုသို့ သုပျစားပေးခွငျးဖွငျ့ ပနျးသရေောဂါကို ပြောကျကငျး စသေညျ့ အပွငျ ပနျးနာ ခြောငျးဆိုး ဆီးအောငျ့ ခေါငျးကိုကျ ကလေးခြှဲထခွငျး၊ ကလေးနှာပိတျခွငျး အမြိုးသမီးမြား မီးယပျသှေးမမှနျသောရောဂါ၊ ၀မျးသကျခွငျးနှငျ့ လနျ့တတျခွငျး တို့ကိုပါ ကာကှယျပေးနိုငျလသေညျ။
လောကျသရှေကျကို မွနျမာဆေးကမျြးမြားအလိုအရ လောကျသပေငျသညျ လေ၊ သလိပျ၊သညျးခွကေို နိုငျ၏။ အသကျကို ရှညျစကော ကာမအားကို တိုးစေ၏။
ရောဂါပိုးကို ပယျတတျ၏။ အဆီကို တိုးပှါးစေ၏။ အူတို့ကို တှနျ့ရှုံ့စတေတျ၏။အဖြားရောဂါတို့ကွောငျ့ ဖွဈတတျသော လရေောဂါ၊ မွငျးသရိုကျ ဖေါရောငျခွငျး၊ပနျးနာ ခြောငျဆိုး အနျခွငျး စသညျတို့ကို ပြောကျကငျး သကျသာစနေိုငျပါသညျ။
လောကျသရှေကျကို လကျဖကျ ခွောကျကဲ့သို့ သောကျသုံးခွငျးဖွငျ့ ဆီးပူ ဆီးအောငျ့နှငျ့ အရပွေားရောဂါတို့ ပြောကျကငျးစေ ပါသညျ။ ။
ပုံသဏ်ဌာနျ : အပငျ – ပငျပြော့ ပငျငယျ သကျပွငျးမြိုး ဖွဈသညျ။ မှီတှယျရာမရှိသော နရောမြား၌ မွပေျေါတှငျ ဖွနျ့တှားပေါကျ၏ ။
အမွငျ့ ၅-၆ ပခေနျ့ မွငျ့၏။ ပငျစညျ သေးသှယျပွီး မှဲခွောကျခွောကျ ရောငျရှိသညျ။ အကိုငျး အခကျမြား အညိုရောငျ ရှိသညျ။
အရှကျ – ရှကျလှဲ ထှကျ၏။ အလြား ၆ လကျမ ၊ အနံ ၂ လကျမခနျ့ ရှိ၏။ ရှကျထိပျ ခြှနျ၏ ။ အပျေါမကျြနှာ ပွငျတှငျ သေးငယျသော ဆူးကလေးမြား ရှိသညျ။
ရှကျညှာ အတောငျ ပါသညျ။ ရှကျညှာရငျး နားတှငျ ရှကျစှယျ အဖတျလေးမြား ရှိ၏ ။ အပှငျ့ – အလှနျသေး ငယျ၏။ နီရောငျသမျးသော အညိုရောငျ သို့မဟုတျ မရနျးရောငျ ရှိ၏။ နတျတျော၊ ပွာသိုလမြားတှငျ ပှငျ့၏။ အသီး – သီးတောငျ့ ဖွဈသညျ။
၁ လကျမမြှ ရှညျ၍ ပွား၏ ။ အဆဈ ၆-၈ ထိရှိ ပွီး ပွောငျခြော၏ ။ သို့မဟုတျ အမှေးနုမြား ရှိသညျ။ တပေါငျး ၊ တနျခူးလမြားတှငျ အသီး ရငျ့မှညျ့သညျ။ အသုံးပွုနိုငျသညျ့ အစိတျအပိုငျးမြား : အမွဈ ၊ အရှကျ ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ တှနေို့ငျသော နရောမြား : မွနျမာနိုငျငံ အောကျပိုငျး စှတျစိုသော ဒသေမြား၌ ပေါကျ၏။ သဘာဝ အလြောကျ ပေါကျရောကျသညျ။
အမွဈ ၁။ ဆီးတှငျ သှေးပါသော ရောဂါအတှကျ အမွဈကို ငရုတျကောငျး အနညျးငယျ ထညျ့ကြိုပွီး ဆီးပွှနျခြောငျးမှ ၎င်းငျး ပွုတျဆေးကို ဖနျပွှနျပိုကျ စသညျဖွငျ့ သှငျးပေးသျော ပြောကျ၏။ အရှကျ ၁။ အရှကျ မနုမရငျ့ကို ပွုတျ၍ သုပျစားခွငျး ၊ တို့စားခွငျးဖွငျ့ ဝမျးကိုကျရောဂါ ၊ ဝမျးဖော ဝမျးရောငျရောဂါ ၊ ကလေးမြား သနျဝမျးကိုကျခွငျး၊ ရငျပွညျ့ရငျကယျ ဖွဈခွငျး ပြောကျ၏ ။
၂။ အရှကျကို လကျဖကျခွောကျ ကဲ့သို့ သောကျသုံးသျော ဆီးပူ ဆီးအောငျ့ရောဂါ နှငျ့ အရပွေား ရောဂါ ပြောကျ၏။
၃။ ၎င်းငျးအရှကျကို အခွားသော ဆေးပငျတို့နှငျ့ ပေါငျးစပျ၍ ဆီးရှငျ ဆေးအဖွဈ ဖျောစပျသုံးနိုငျသညျ။
၄။ လောကျသရှေကျ နှငျ့ ထားဝယျ မှိုငျးရှကျကို ရနှေေးဖွော၍ သုပျစား သျော ဆီးပူ ၊ ဆီးအောငျ့ ၊ ဝမျးကိုကျ ၊ သှေ့းဝမျးသှား၊ သှေးမွငျး သရိုကျ ၊ မီးယပျ သှေးလှနျတို့ကို ရပျတနျ့ စသေညျ။
၅။ လောကျသရှေကျခွောကျ ၊ ဖလံ တောငျဝှေး ရှကျခွောကျတို့ကို ဆတူ အမှုနျ့ ပွု၍ အုနျးဆီ နှငျ့ ဖြျောစပျပွီး နပေူပူတှငျ လှနျး၍ အပျေါဆီ အကွညျကို နားတှငျးသို့ အစကျခြ ခွငျး၊ ကွကျတောငျနှငျ့ ကွပျပေးခွငျး ပွုလုပျပါက နားပွညျယို ၊ နားကိုကျ ရောဂါမြား ပြောကျရနျ နားတှငျးရှိ ပိုးမြားကို သစေသေညျ။ လိမျးဆေး အဖွဈ သုံးပါက ဝဲနာ၊ အနာစကျနာ ၊ အနာမီးလြှံ ၊ အိုငျးနာ ၊ ဒကျနာမြား ပြောကျ၏။
၆။ လောကျသရှေကျ ၊ စံကားစိမျး ပှငျ့ခွောကျ တို့ကို နှမျးဆီ စဈစဈနှငျ့ စိမျပွီး ခေါငျးလိမျးဆီအဖွဈ သုံးပါက ခေါငျးကိုကျ ၊ ခေါငျးပူ ၊ ဗောကျထခွငျး ၊ ယားခွငျး ၊ သနျးပေါခွငျးမြား ပြောကျ၍ ဦးနှောကျကို ကွညျလငျစသေညျ။
၇။ လောကျသရှေကျ နှငျ့ ဆောကျပွာရှကျ ၂ မြိုးကို ပွုတျ၍ ရနှေေးနှေးဖွငျ့ မီးဖှားပွီးနောကျ မိခငျကို လညျးကောငျး ၊ ကလေးကို လညျးကောငျး ခြိုးပေးပါက ကဗြဟုံး ရောဂါ ၊ မှေးကတညျးက ပါလာ တတျသော သူငယျနာမြိုးစုံ ၊ အကွောတကျ ၊ အကွောကပျ ရောဂါနှငျ့ မိဘကိုယျမှ ကူးစကျတတျသော ရောဂါမြားကို ကာကှယျနိုငျ၏။
၈။ လောကျသရှေကျကို ကိုယျပူ ခြှဲထ ၊ အညှျောဝငျ ၊ ခြောငျးဆိုး နှာစေး ၊ နှာပိတျ ရောဂါအတှကျ လညျး ဆေးဖျောစပျသုံးနိုငျ၏ ။
၉။ လောကျသရှေကျ ၊ ရခေရာရှကျ ၊ နနှငျးရိုးရိုးအရှကျ ဆတူ အကြှမျး လှျော၍ နှမျးဆီတှငျ ဖြျောလိမျးပါက ကလေးမြား ခကျြကွိုး ခကျြတိုငျ ကိုကျခွငျး ပြောကျ၍ ခကျြကွိုး ကွှလှေယျ၏ ။ နို့ခြောငျး ပိတျ ၊ နို့နာ ၊ နို့ပဉျြးထသော မိခငျမြားကို လိမျးပေးက လငျြမွနျစှာ သကျသာ ပြောကျကငျးစေ၏။
၁၀။ ကလေးမြား အနာစကျ ၊ ဝဲစို ၊ အိုငျးနာကို လောကျသရှေကျ အကြှမျးလှျော၍ ရနေံကွီး စဈစဈ နှငျ့ လူးလြှငျ ပြောကျ၏ ။
၁၁။ ကြှဲ နှားမြား အနာပေါကျ၍ လောကျကောငျ မြားကခြွငျး ၊ ငပိအိုးတှငျ လောကျကောငျမြား ကခြွငျးအတှကျ ၎င်းငျး လောကျသရှေကျကို ထောငျး၍ အမှုနျ့ဖွူးပေးသျော လောကျမြား သကွေေ ပကျြစီးပွီး အနာမြားကို လညျး အသားနုတကျ၍ ကကျြစေ၏။
၁၂။ စအို မြှော့ဝငျကာ ရောဂါအတှကျ လောကျသရှေကျ ၊ ကွှကျနား ပေါငျးရှကျ၊ ကွကျမှေး(ကွကျတောငျ မှ အမှေး) ၎င်းငျး ၃ ပါး ဆတူ စု၍ ပွုတျပွီး အငှကေို့ ခြှေးအောငျး သကဲ့သို့ အိုးပျေါတှငျ ထိုငျပွီး အခိုးအငှေ့ မြား အခွားသို့ မထှကျနိုငျရနျ ခါးအောကျပိုငျး နှငျ့ အိုးကို ပါ အဝတျထူ ထူ ရဈပတျ၍ အငှေ့ မှိုငျး ခံပါက မြှော့မြား အကောငျ လိုကျသျော လညျးကောငျး၊ ကွပွေုတျ၍ သျောလညျးကောငျး ကလြာစေ၏ ။ လောကျသရှေကျ နှငျ့ ကွှကျနားပေါငျး ဆတူပွုတျ၍ လကျဖကျရညျ ကွမျးပနျးကနျလုံး နှငျ့လညျး ခပျပူပူ သောကျပေးရ၏။
လောကျသရှေကျကို limit အကနျ့အသတျဖွငျ့သာ သောကျပါ။လောကျသရှေကျဟာ အနုဇီဝ Virus တှကေိုခြေ မှုနျးနိုငျပါတယျ ၊ TB ရောဂါတောငျ အမွဈပွတျ လောကျအောငျ စှမျးပါတယျ ၊
ငပိ အိုးထဲထညျ့ထားရငျ လောကျကောငျ မပေါကျနိုငျလို့ လောကျသရှေကျလို့ ချေါတှငျလာတာဖွဈပါတယျ၊ သူ့ကိုကြို သောကျရငျ အတိုငျးအဆ Limit. လိုပါတယျ ၊
ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ လူ့ခန်ဓာကို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျပေးနတေဲ့ အကြိုးပွုBacteria ဘကျတီးရီး ယားတှပေါ ရောနှောသဆေုံးတတျသလို ကြားမြိုးပှား ( သုတျပိုး)တှပေါ သဆေုံးတတျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ Limit ထားပွီး သောကျပါ၊ အလှနျဆုံးရကျ၂၀ထကျအမြားဆုံး ရကျ၃၀ထကျကြျောလှနျအောငျနစေ့ဉျရကျဆကျမသောကျပါနှငျ့ ၊တနှဈခနျ့ စှဲသောကျလြှငျ Side effect
ဘေးထှကျဆိုးကြိုးအဖွဈ ခန်ဓာကိုယျတှငျးကို အကြိုးပွုသောကိုယျတှငျးမှ Bacteria ဘကျတီးရီးယားမြား အားလုံးသဆေုံးနိုငျပါသညျ၊တနျဆေးလှနျဘေး ဖွဈပါတယျ ၊
အကြိုးအကွောငျး ခြိနျဆသုံးစှဲကွပါ ။ကနျြးမာ ခမျြးသာကွပါစေ။Covid19 ကပျဘေးမှ အမွနျကငျးဝေး ကွပါစေ။ မွနျမာပွညျသူ ပွညျသားအားလုံးရနျသူမြိုးငါးပါးတို့၏အနှောကျ အယှကျတို့မှ ကငျးလှတျကွပါစေ။
အနာရောဂါဘယ အနှောကျ အယှကျတို့မှလညျးကငျးလှတျကွပါစေ။
ခုချိန်မှာCOVID_-19ရောဂါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက် ဆေးအဖြစ် ညွှန့်ပေးလိုက်ပါတယ်
လောက်သေရွက်ဟာလူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကပိုးတွေ အဆုပ်တွေတွက်သန့်စင်ဆေးကြောပေးတဲ့အထိရောက်ဆုံး ဆေးဖြစ်ပါတယ်
အနံ့မရသူတွေ ကိုဗစ်ဖစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်အရမ်းကောင်းတဲ့ဆေးပါ လောက်သေရွက်(၁၀)သားကို ဆေးကြောသန့်စင်ပီး ရေတစ်ဖလားခန့်ထည့်ပီး ပြုတ်ကျိုပါ။
ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ သံပရာတခြမ်းလှီးထည့်ပါ။တစ်ရက် သုံးခွက်သောက်ပေးခြင်း ဖြင့် ကိုဗစ်ပျောက်ကင်း စေပါတယ်COVID-19အတွက်အရမ်းထိရောက်မှုရှိတဲ့ ဆေးပါ။
မှတ်ချက်။ ဆီးချို သွေးတိုး ကျောက်ကပ်သမားတွေတွက် တစ်ရက် တစ်ခွက်ပဲ သောက်သုံးပေးပါဒီဆေးနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်၊ ပူတာအို ဒေသမှာ Covid-19 ပိုး တွေ့လူနာ တွေ အများကြီး ပျောက်ကုန်ပါပြီ။
နာမည်ကတော့ လောက်သေရွက်၊ ရှေးလူကြီးတွေက ဝမ်းလျောတဲ့ အခါ၊ချောင်းဆိုးတဲ့အခါတောက်တောက်စဉ်း၊အခြောက်လှန်းပြီး ကျိုချက်သောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ယခု Covid-19 ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာ ပြလာတဲ့အခါ Covid-19 မှန်း မသိဘဲ ဖြစ်နေကြ ရိုးရိုးသာမန်၊ ရာသီတုပ်ကွေးလို့ ယူစပြီး သောက်ခဲ့ကြရာကနေ တကယ်တမ်း Covid ဖြစ်တဲ့သူက
သက်သာလာခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီကနေ တဆင့်ပြီးတဆင့် လူသိများလာပြီး လူတိုင်းလိုလိုပဲ သောက်သုံး နေကြပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူတိုင်းလူတိုင်း စမ်းသပ်သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။(အရှုံးမရှိဘူး) ကိုယ်တိုင်သိပြီး အခြားသူများလည်း သိအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
လောက်သေရွက် သုံးခွက် တစ်ခွက်တင်၊ ကြို၍သောက်ကိုဗစ် ပျောက်ကင်းသူတွေ များလာနေပြီ ။
ကိုဗစ် ဖြစ်ပြီး လောက်သေရွက်သောက်၍ ပျောက်သူတွေကိုယ်တွေ့ ပြောကြပါတယ် ။အနာနဲ့ဆေးတွေ့၍ အမြန်ဆုံးသက်သာပျောက်ကင်းကြပါစေ။
ယိုးဒယားကပြန်လာတဲ့ ဆရာသမားပြောလို့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း လည်ချောင်း ကင်ဆာဖြစ်တာ ဒီလောက်သေရွက် နဲ့မှ အရှင်းပျောက်ရောဗျာ တကယ်လက်တွေ့ပါ။။
နောက်ပြီး HIV ပိုး။ သူ့ကျတစ်မျိုး လောက်သေရွက်ကို အခြောက်ခံ ရေနွေးနဲ့သာ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း သောက်သလိုသောက်ဗျာ တစ်လပဲ ကြာမယ်။ စစ်ကြည့်ဗျာ။ ပိုးကောင်ရေကျပြီး ၂ လဆို အရှင်းပျောက်ကင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
ဦးဇင်းတို့ ကျေးရွာဘက်မှာ ပေါပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်။အဆုပ်အတွက် ကောင်းတဲ့ဆေးမို့…
ပအိုဝ်းအ ခေါ်… သီကျာဗင်=(သိကြားမင်းလှံ)
ထိုသို့ သိကြသော်လည်း ဆေးလိပ်စွဲနေပြီးဆေးလိပ်မဖြတ်နိုင်ကြသူများအတွက်ဆေးလိပ်စွဲမြဲစွာ သောက်သုံးခဲ့ပြီး ဆေးလိပ်ဖြတ်သူ များလည်း အဆုတ် သန့်ရှင်းအောင် ပြုလုပ်ရန် သင့်လျှော်သောနည်း ဖြစ်ပါသည်။နည်းစနစ်မှာ အောက်ပါနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ရပါမည်။
လူတိုင်းနီးပါး သိရှိသော လောက်သေပင်မှ လောက်သေရွက် (၅) ကျပ်သား ခူးယူပြီး ရေမတ်ခွက် သုံးခွက်နှင့် ပြုတ်ကျိုပါ။ ရေမတ်ခွက်တစ်ခွက်စာကျန်လျှင်အအေးခံစစ်ယူပြီး ထိုပြုတ်ရည်အား တစ်နေ့တည်းကုန်အောင် သောက်ပေးပါ။
ထိုသို့(၅) ရက်ဆက် တိုက်သောက် ပေးလျှင် ဆေးချိုး၊ ဆေးချေး(ကြေး) များ ကွာကျပြီး အဆုတ်သန့်ရှင်း သွားစေပါလိမ့်မည်။
ဆယ်ရက်ခန့်အထိ ဆက်တိုက် ပြုလုပ် သောက်နိုင် ပါသည်။ဆေးချိုး(ကြေး) များကွာကျ သွားလျှင် အသက်ရှူ ၍ ပိုမိုကောင်းမွန် လာပြီးသိသာစွာ လန်းဆန်း ပေါ့ပါးလာပါလိမ့်မည်။
အထက်ပါနည်းစနစ်က အဆုတ်တွင်အနာပေါက်သူ၊ တီဘီရောဂါကိုပင် တစ်လမှ သုံးလအထိ ဆက်တိုက်မှန်မှန် သောက်ပေးခြင်းဖြင့် အဆုတ်နာ ရောဂါ သက်သာပျောက် ကင်းသူ ရှိခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် မည်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျှမရှိဘဲအဆုတ်ကို စင်ကြယ် ကောင်းမွန်စေပါသည်။ ။လောက်သေရွက်ကို အဆုတ်ကောင်းစေရန် အမှတ်တရသုံးစွဲသင့်ပေသည့်အပြင်…
ပန်းသေဖြစ်က ၀မ်းမသာရသည်က အမျိုးသားတို့၏ ဘ၀သာဖြစ်သည်။ အမျိုးသားတို့ဖြစ်တတ်ကြသော ပန်းသေရောဂါတွင်လည်း လောက်သေပင်၏ အစွမ်း အံ့မခန်းပါဝင်ပြန်သည်။
လက်တွေ့ ပန်းသေရောဂါ ခံစားခဲ့ဖူးသူ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက လောက်သေပင်သည် ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသော ဟင်းလျာ ဖြစ်ပါကြောင်း ယုံကြည်သူတို့ အတွက် အမှန်ပင် ပန်းသေရောဂါ ကို ပျောက်ကင်းစေသည် ဟုဆိုပါသည်။
စားဖွယ်အဖြစ် လောက်သေရွက် လယ်ပတူရွက် ငရံ့ပတူရွက်နှင့် ဆီးဖြူသီးတို့ကို ရေနွေးဖြင့် ဖျော၍ အစားသွပ်ပြီး ပုံမှန်သုပ်စားခြင်းပင် ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။
ထိုသို့ သုပ်စားပေးခြင်းဖြင့် ပန်းသေရောဂါကို ပျောက်ကင်း စေသည့် အပြင် ပန်းနာ ချောင်းဆိုး ဆီးအောင့် ခေါင်းကိုက် ကလေးချွဲထခြင်း၊ ကလေးနှာပိတ်ခြင်း အမျိုးသမီးများ မီးယပ်သွေးမမှန်သောရောဂါ၊ ၀မ်းသက်ခြင်းနှင့် လန့်တတ်ခြင်း တို့ကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်လေသည်။
လောက်သေရွက်ကို မြန်မာဆေးကျမ်းများအလိုအရ လောက်သေပင်သည် လေ၊ သလိပ်၊သည်းခြေကို နိုင်၏။ အသက်ကို ရှည်စေကာ ကာမအားကို တိုးစေ၏။
ရောဂါပိုးကို ပယ်တတ်၏။ အဆီကို တိုးပွါးစေ၏။ အူတို့ကို တွန့်ရှုံ့စေတတ်၏။အဖျားရောဂါတို့ကြောင့် ဖြစ်တတ်သော လေရောဂါ၊ မြင်းသရိုက် ဖေါရောင်ခြင်း၊ပန်းနာ ချောင်ဆိုး အန်ခြင်း စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်း သက်သာစေနိုင်ပါသည်။
လောက်သေရွက်ကို လက်ဖက် ခြောက်ကဲ့သို့ သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ဆီးပူ ဆီးအောင့်နှင့် အရေပြားရောဂါတို့ ပျောက်ကင်းစေ ပါသည်။ ။
ပုံသဏ္ဌာန် : အပင် – ပင်ပျော့ ပင်ငယ် သက်ပြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ မှီတွယ်ရာမရှိသော နေရာများ၌ မြေပေါ်တွင် ဖြန့်တွားပေါက်၏ ။
အမြင့် ၅-၆ ပေခန့် မြင့်၏။ ပင်စည် သေးသွယ်ပြီး မွဲခြောက်ခြောက် ရောင်ရှိသည်။ အကိုင်း အခက်များ အညိုရောင် ရှိသည်။
အရွက် – ရွက်လွဲ ထွက်၏။ အလျား ၆ လက်မ ၊ အနံ ၂ လက်မခန့် ရှိ၏။ ရွက်ထိပ် ချွန်၏ ။ အပေါ်မျက်နှာ ပြင်တွင် သေးငယ်သော ဆူးကလေးများ ရှိသည်။
ရွက်ညှာ အတောင် ပါသည်။ ရွက်ညှာရင်း နားတွင် ရွက်စွယ် အဖတ်လေးများ ရှိ၏ ။ အပွင့် – အလွန်သေး ငယ်၏။ နီရောင်သမ်းသော အညိုရောင် သို့မဟုတ် မရန်းရောင် ရှိ၏။ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ပွင့်၏။ အသီး – သီးတောင့် ဖြစ်သည်။
၁ လက်မမျှ ရှည်၍ ပြား၏ ။ အဆစ် ၆-၈ ထိရှိ ပြီး ပြောင်ချော၏ ။ သို့မဟုတ် အမွေးနုများ ရှိသည်။ တပေါင်း ၊ တန်ခူးလများတွင် အသီး ရင့်မှည့်သည်။ အသုံးပြုနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ : အမြစ် ၊ အရွက် ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့နိုင်သော နေရာများ : မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်း စွတ်စိုသော ဒေသများ၌ ပေါက်၏။ သဘာဝ အလျောက် ပေါက်ရောက်သည်။
အမြစ် ၁။ ဆီးတွင် သွေးပါသော ရောဂါအတွက် အမြစ်ကို ငရုတ်ကောင်း အနည်းငယ် ထည့်ကျိုပြီး ဆီးပြွန်ချောင်းမှ ၎င်း ပြုတ်ဆေးကို ဖန်ပြွန်ပိုက် စသည်ဖြင့် သွင်းပေးသော် ပျောက်၏။ အရွက် ၁။ အရွက် မနုမရင့်ကို ပြုတ်၍ သုပ်စားခြင်း ၊ တို့စားခြင်းဖြင့် ဝမ်းကိုက်ရောဂါ ၊ ဝမ်းဖော ဝမ်းရောင်ရောဂါ ၊ ကလေးများ သန်ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ ရင်ပြည့်ရင်ကယ် ဖြစ်ခြင်း ပျောက်၏ ။
၂။ အရွက်ကို လက်ဖက်ခြောက် ကဲ့သို့ သောက်သုံးသော် ဆီးပူ ဆီးအောင့်ရောဂါ နှင့် အရေပြား ရောဂါ ပျောက်၏။
၃။ ၎င်းအရွက်ကို အခြားသော ဆေးပင်တို့နှင့် ပေါင်းစပ်၍ ဆီးရွှင် ဆေးအဖြစ် ဖော်စပ်သုံးနိုင်သည်။
၄။ လောက်သေရွက် နှင့် ထားဝယ် မှိုင်းရွက်ကို ရေနွေးဖြော၍ သုပ်စား သော် ဆီးပူ ၊ ဆီးအောင့် ၊ ဝမ်းကိုက် ၊ သွေ့းဝမ်းသွား၊ သွေးမြင်း သရိုက် ၊ မီးယပ် သွေးလွန်တို့ကို ရပ်တန့် စေသည်။
၅။ လောက်သေရွက်ခြောက် ၊ ဖလံ တောင်ဝှေး ရွက်ခြောက်တို့ကို ဆတူ အမှုန့် ပြု၍ အုန်းဆီ နှင့် ဖျော်စပ်ပြီး နေပူပူတွင် လှန်း၍ အပေါ်ဆီ အကြည်ကို နားတွင်းသို့ အစက်ချ ခြင်း၊ ကြက်တောင်နှင့် ကြပ်ပေးခြင်း ပြုလုပ်ပါက နားပြည်ယို ၊ နားကိုက် ရောဂါများ ပျောက်ရန် နားတွင်းရှိ ပိုးများကို သေစေသည်။ လိမ်းဆေး အဖြစ် သုံးပါက ဝဲနာ၊ အနာစက်နာ ၊ အနာမီးလျှံ ၊ အိုင်းနာ ၊ ဒက်နာများ ပျောက်၏။
၆။ လောက်သေရွက် ၊ စံကားစိမ်း ပွင့်ခြောက် တို့ကို နှမ်းဆီ စစ်စစ်နှင့် စိမ်ပြီး ခေါင်းလိမ်းဆီအဖြစ် သုံးပါက ခေါင်းကိုက် ၊ ခေါင်းပူ ၊ ဗောက်ထခြင်း ၊ ယားခြင်း ၊ သန်းပေါခြင်းများ ပျောက်၍ ဦးနှောက်ကို ကြည်လင်စေသည်။
၇။ လောက်သေရွက် နှင့် ဆောက်ပြာရွက် ၂ မျိုးကို ပြုတ်၍ ရေနွေးနွေးဖြင့် မီးဖွားပြီးနောက် မိခင်ကို လည်းကောင်း ၊ ကလေးကို လည်းကောင်း ချိုးပေးပါက ကျဗဟုံး ရောဂါ ၊ မွေးကတည်းက ပါလာ တတ်သော သူငယ်နာမျိုးစုံ ၊ အကြောတက် ၊ အကြောကပ် ရောဂါနှင့် မိဘကိုယ်မှ ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်၏။
၈။ လောက်သေရွက်ကို ကိုယ်ပူ ချွဲထ ၊ အညှော်ဝင် ၊ ချောင်းဆိုး နှာစေး ၊ နှာပိတ် ရောဂါအတွက် လည်း ဆေးဖော်စပ်သုံးနိုင်၏ ။
၉။ လောက်သေရွက် ၊ ရေခရာရွက် ၊ နနွင်းရိုးရိုးအရွက် ဆတူ အကျွမ်း လှော်၍ နှမ်းဆီတွင် ဖျော်လိမ်းပါက ကလေးများ ချက်ကြိုး ချက်တိုင် ကိုက်ခြင်း ပျောက်၍ ချက်ကြိုး ကြွေလွယ်၏ ။ နို့ချောင်း ပိတ် ၊ နို့နာ ၊ နို့ပျဉ်းထသော မိခင်များကို လိမ်းပေးက လျင်မြန်စွာ သက်သာ ပျောက်ကင်းစေ၏။
၁၀။ ကလေးများ အနာစက် ၊ ဝဲစို ၊ အိုင်းနာကို လောက်သေရွက် အကျွမ်းလှော်၍ ရေနံကြီး စစ်စစ် နှင့် လူးလျှင် ပျောက်၏ ။
၁၁။ ကျွဲ နွားများ အနာပေါက်၍ လောက်ကောင် များကျခြင်း ၊ ငပိအိုးတွင် လောက်ကောင်များ ကျခြင်းအတွက် ၎င်း လောက်သေရွက်ကို ထောင်း၍ အမှုန့်ဖြူးပေးသော် လောက်များ သေကြေ ပျက်စီးပြီး အနာများကို လည်း အသားနုတက်၍ ကျက်စေ၏။
၁၂။ စအို မျှော့ဝင်ကာ ရောဂါအတွက် လောက်သေရွက် ၊ ကြွက်နား ပေါင်းရွက်၊ ကြက်မွေး(ကြက်တောင် မှ အမွေး) ၎င်း ၃ ပါး ဆတူ စု၍ ပြုတ်ပြီး အငွေ့ကို ချွေးအောင်း သကဲ့သို့ အိုးပေါ်တွင် ထိုင်ပြီး အခိုးအငွေ့ များ အခြားသို့ မထွက်နိုင်ရန် ခါးအောက်ပိုင်း နှင့် အိုးကို ပါ အဝတ်ထူ ထူ ရစ်ပတ်၍ အငွေ့ မှိုင်း ခံပါက မျှော့များ အကောင် လိုက်သော် လည်းကောင်း၊ ကြေပြုတ်၍ သော်လည်းကောင်း ကျလာစေ၏ ။ လောက်သေရွက် နှင့် ကြွက်နားပေါင်း ဆတူပြုတ်၍ လက်ဖက်ရည် ကြမ်းပန်းကန်လုံး နှင့်လည်း ခပ်ပူပူ သောက်ပေးရ၏။
လောက်သေရွက်ကို limit အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ သောက်ပါ။လောက်သေရွက်ဟာ အနုဇီဝ Virus တွေကိုချေ မှုန်းနိုင်ပါတယ် ၊ TB ရောဂါတောင် အမြစ်ပြတ် လောက်အောင် စွမ်းပါတယ် ၊
ငပိ အိုးထဲထည့်ထားရင် လောက်ကောင် မပေါက်နိုင်လို့ လောက်သေရွက်လို့ ခေါ်တွင်လာတာဖြစ်ပါတယ်၊ သူ့ကိုကျို သောက်ရင် အတိုင်းအဆ Limit. လိုပါတယ် ၊
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လူ့ခန္ဓာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ အကျိုးပြုBacteria ဘက်တီးရီး ယားတွေပါ ရောနှောသေဆုံးတတ်သလို ကျားမျိုးပွား ( သုတ်ပိုး)တွေပါ သေဆုံးတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Limit ထားပြီး သောက်ပါ၊ အလွန်ဆုံးရက်၂၀ထက်အများဆုံး ရက်၃၀ထက်ကျော်လွန်အောင်နေ့စဉ်ရက်ဆက်မသောက်ပါနှင့် ၊တနှစ်ခန့် စွဲသောက်လျှင် Side effect
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကို အကျိုးပြုသောကိုယ်တွင်းမှ Bacteria ဘက်တီးရီးယားများ အားလုံးသေဆုံးနိုင်ပါသည်၊တန်ဆေးလွန်ဘေး ဖြစ်ပါတယ် ၊
အကျိုးအကြောင်း ချိန်ဆသုံးစွဲကြပါ ။ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။Covid19 ကပ်ဘေးမှ အမြန်ကင်းဝေး ကြပါစေ။ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားအားလုံးရန်သူမျိုးငါးပါးတို့၏အနှောက် အယှက်တို့မှ ကင်းလွတ်ကြပါစေ။
အနာရောဂါဘယ အနှောက် အယှက်တို့မှလည်းကင်းလွတ်ကြပါစေ။
မကျြနှာ မညျးညဈခွငျးကငျးစတေဲ့ နညျးလမျးကောငျးလေး